Waslad - Wikipedia
Waslad (Af Ingiriis : steak; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa nooc ka mid ah hilibka xoolaha, gaar ahaan hilibka laga jaro garabka, jeeniga, lugta, dhabarka iyo meelaha leh jiidh saafi ah. Sidoo kale wasladu waa hilibka laga gooyo muruqa xoolaha kaasi oo leh waxyar oo baruur ah, laakiin inta badan jiidh saafi ah. Waslada waxaa laga diyaariyaa hilibka lo'da, geela, adhiga iyo doofaarka. Hilibka kaluunka iyo digaaga iyo shimbiraha laga sameeyn karo waslada.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Waslad&oldid=228384"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Jannaayo 2022, marka ee eheed 01:48.